vfxAlert waxay diyaarineysaa inay soo bandhigto codsi moobil ah | vfxAlert official blog
Codsiga moobiilka vfxAlert
Siideynta beta-version ee mobilada vfxAlert waxay noqon doontaa Abriil 20. Waqti badan ma harsan ka hor inta aan la sii deyn, haddana calaamadaha vfxAlert waxaa laga heli karaa daaqadda biraawsarka ama Telegram-bot. Akhriso tilmaamaha ku saabsan sida loo isticmaalo Telegram-bot .
Xuduudihii waqtiga iyo waqtiga ayaa sii luminaya .
Codsiga moobiilka vfxAlert wuxuu fursad u siinayaa in la ganacsado waqti kasta iyo goob kasta. Tani waxay ka dhigi doontaa calaamadaha vfxAlert in badan oo baahi loo qabo.
Teknolojiyada casriga ah .
Dhammaan qalabka laga heli karo nooca desktop-ka ee vfxAlert oo ay ku jiraan aaladaha gorfaynta dheeraadka ah ayaa lagu soo bandhigi doonaa arjiga moobiilka. Ganacsaduhu wuxuu awoodi doonaa inuu helo astaamaha, ku falanqeeyo suuqa tilmaamayaal dheeri ah, raac xulashada markasta iyo waqti kasta, intaas oo dhanna waxay ku noqon doontaa hal daaqad iyadoo dulaal uu ku jiro casriga ganacsadaha.
Haddii aad rabto inaad noqoto qofka ugu horreeya ee adeegsada arjiga, iska-qor annaga warbaahinta bulshada oo raac wararkeena.
Ku bilow inaad ku baayacmushtarto calaamadaha vfxAlert. Waxaad ku tijaabin kartaa astaamaha bilaashka ah https://vfxalert.com/